Ngathi-iNc Isa Ishishini kunye neNkampani yezoRhwebo
Ingubo yeCapitol yeHlabathi
Idolophu yaseNanchang Hongwei Knitting Factory
I-ISAPPARELS yaziwa ngokuba yi "Garment Capitol yeHlabathi", apho iMimandla yoPhuhliso lwezoQoqosho kaZwelonke inqamlezayo. Kungoko ukubakho kwezinto, ezothutho kunye nabasebenzi kuyenza ibeyindawo efanelekileyo yokwenza imveliso.
Saseka ngo-1998, njenge "Nanchang Ihlomela-dolophu laseHongwei Ukunitha Iimpahla zeFektri". Ngo-2010, i-ISAPPARELS iqale njengokusika kunye nokuthunga umenzi wempahla eNanchang China.
Namhlanje, sidityaniswe ngokuthe nkqo ngumenzi wengubo ukubonelela ngokuLuka, ukuDaya, ukusika, ukuthunga kunye nokuprinta phantsi kwemigangatho esemgangathweni kunye nolawulo lwe-ISAPPARELS. Ngoku injongo yethu kukuvelisa iimpahla ezinemibala eyoyikisayo necacileyo, engenabungozi ebantwini xa kudibana i-Oeko-Tex Standard ngovavanyo lweSGS. Ngestokhwe sethu esili-15 leetoni zelaphu, imigca yokuthunga ephambili eyi-8 kunye nenkqubo yoomatshini bokushicilela abedijithali abali-15, iqela le-ISAPPARELS liyakwazi ukubonelela ngeempahla ezi-5 ezinomgangatho wempendulo, kunye nekota yokuhambisa ngokukhawuleza, kubandakanya uyilo ngaphakathi kweeyure eziyi-8, isampulu ngaphakathi kweentsuku ezintlanu, ubunzima imveliso zingadlulanga iintsuku ezili-15.
Olu manyano lubanzi lusinika ukubonelela abathengi bethu ngolawulo lwekhwalithi engenamthungo ethintela umngcipheko onokubakho kurhwebo lwamanye amazwe, ixesha lokujika ngokukhawuleza lokuhlangabezana nomjikelo wentengiso kunye nexabiso elikhuphisanayo. Sinikezela ngeemveliso zeempahla kubandakanya i-T-Shirts, iihempe zePolo, iiHoodies, iibhulukhwe, iivenkile, iiCaps kunye neebhegi. Ukongeza, ugxininiso lwamva nje lwezinto zentengiso kubandakanya iicaps, iikomityi, iibhotile, isambrela njl njl. Zonke iimveliso ziyi-OEM, i-ODM okanye enye -Yima inkonzo.
Sinamava ekunikezeleni abathengi abafuna ukuthengiswa ngokungqongqo kunye nokuvavanywa kwemveliso kubandakanya iDisney, iMarble, iStudiyo seNdawo yonke, i-Major League Baseball, i-Forever 21, i-Samsung, i-DHL khankanya nje ezimbalwa. Yeyona njongo yethu iphambili kukuba abathengi bethu babe kufanelekile kwiimarike zabo ukuze iISAPPARELS zibe ezifanelekileyo kumthengi esisebenzela yena. Siyazingca ngokuba nabathengi abaninzi abonelisayo ngaphandle kwehlabathi kubandakanya uMntla noMzantsi Merika, uMbindi Mpuma, iYurophu neOstreliya.
Kwinqununu YENKQUBO YOKWENZA NENKONZO, Wamkelekile kwi-ISAPPARELS.